Akukho Okukhathazayo Okunye. Uchwepheshe we-Semalt Uyazi ukuthi Ungamelana kanjani ne-Bot Traffic usebenzisa i-Google Analytics
Sula imibiko nedatha ibonisa okuningi uma kuziwa ekukhangiseni oku-intanethi. Ukuthola idatha nezibalo mahhala emgwaqweni ongafuneki, i-bot traffic, kanye ne-malware kubonisa amakhono nobuchwepheshe okusetshenziselwa ukulondoloza iwebhusayithi. Emasontweni ambalwa adlule, amabhizinisi e-B2B nezinhlangano ezincane zibhekene nenselele yokufaka ngaphandle kwe-traffic traffic kanye nomgwaqo wangaphakathi kusuka emibikweni yabo.
Ngenhlanhla, i-Google Analytics isiyilondolozile ngemuva kokuletha amasu okuhlunga okusebenzayo asebenzisa ulwazi oluguquguqukayo nolwazi lwabasebenzisi ukukhipha ithrekhi engadingeki kusuka kubwazi nezinambuzane ezaziwayo. Ukutholakala kwegciwane le-Trojan, i-malware, kanye ne-bot traffic skews kuphelisa idatha yabasebenzisi abatholakala ku-Google Analytics ngendlela enkulu kakhulu.
Umphathi Wezokuthuthukiswa Kwamakhasimende Semalt , u-Andrew Dyhan, uchaza ukuthi kungani ukuhlukanisa imoto yangempela kusuka ebhodini kanye nomgwaqo wangaphakathi kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekuthengiseni inthanethi.
Impikiswano yeBots kanye neziSpipali kuzibalo zakho
Muva nje, i-Google yenza isibuyekezo esibalulekile ku-Google Analytics. Ukubuyekeza kwenza kube lula kubadayisi ukukhipha iziphequluli namabhugi kusuka kumbiko nemibiko yakho. Ukutholakala komgwaqo wangaphakathi ne-bot kuyaphazamisa idatha yakho ekhona kwizinambuzane zewebhu nezinjini zokusesha.
I-Google isebenza ukuhlunga amafayela wokubhalisa kwe-malware, igciwane leTrojan, i-bots eyaziwa, kanye nezipikisi. Ngeshwa, ezinye izinhlobo zethrafikhi ezakhiwe ngabangenamahloni ezinonya ziyakuthinta isayithi lakho. futhi iziphequluli zimelela okungaphezu kweyesithathu kwe-intanethi ye-intanethi. Ngaphambi kokukhipha umgwaqo kusuka kusayithi lakho, cabanga ngokuhlola igama lomngani lomgwaqo ukugwema ukungabandakanyi ithrafikhi langempela.
I-Take ye-IAB ku-Bots ne-Spiders
I-Interactive Advertising Bureau, i-international corporation evumela izimboni zokuthengisa ukuba zithuthuke embonini, iphinde ikhuthaze isidingo sokuvimbela i-bots kanye nezipikha emgwaqeni wangempela. Lezi zakhiwo zihlanganisa 'I-International Spiders neBots List', uhlu oluveza wonke amafomu kanye nezinhlobo zama bots kanye nezikhawu ezithinta ithrafikhi yangempela embonini yokuthengisa. Ukuze uhlu lwakho lusebenze ngokuphumelelayo, kufanele ulibuyekeze njalo ngenyanga
Ngonyaka, abathengisi nabanikazi bebhizinisi base-intanethi bakhokhela imali ejwayelekile ye $ 7,000. Imali iyahlukahluka kuye ngokuthi ngabe iklayenti ibhalisele ubulungu be-IAB. Ngemuva kokuthi ubhalisele i-IAB, i-Google Analytics iqala ukuhlunga imibiko yakho nedatha ngokwenza ukuqhathaniswa okuphelele kwama-bots nezigcawu eziwaziwayo kanye ne-website yakho. Ngaphambi kokwethulwa kwalesi sibuyekezo nge-Google, amafemu, nezinhlangano zenze ukuhlunga okubhaliwe, lapha ezinye zezinkampani eziyaziwa kanye nezinsipho zikwazi ukuthola ukufinyelela kwedatha yakho nemibiko.
Ukukhipha ibhubhu eyaziwayo nezinhloli ezivela emotweni yakho, vula 'Izilungiselelo Zokubuka Ukubika' futhi unike amandla ithuluzi lakho ukuqala. Pheqa ngokusebenzisa izinketho ezikhonjisiwe kuze kube sekhasini eliphansi, bese unike amandla ukuhlunga i-bot. Ngokuya kwesizinda sewebhusayithi yakho, izinombolo zakho zethrafikhi ziqala ukwehla kwinombolo engokoqobo. Ngisho noma inombolo ingase iqukethe ithrekhi engafanele njenge-traffic yangaphakathi, i-bots eyaziwa kanye ne-spider traffic izokhishwa ezibalo zakho. Ukuphumelela kwebhizinisi lakho le-intanethi kunqunywa yimizamo eyenziwe ekufinyeleleni imigomo yakho. Bhalisela ubulungu be-IAB futhi ungabandakanyi izigabhu eziwaziwayo kanye ne-bots ezithinta umbiko wakho.